Jane Fonda နှင့် Lily Tomlin: ရာသက်ပန် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ ကျင်းပခြင်း။ - English-Video.net
Jane Fonda နှင့် Lily Tomlin: ရာသက်ပန် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ ကျင်းပခြင်း။
အထင်ကရ နှစ်ယောက်အတွဲဖြစ်တဲ့ Jane Fonda နဲ့ Lily Tomlin တို့ဟာ ခင်မင်ရင်းနှီးကြတာ ဆယ်စုနှစ်တွေချီခဲ့ပါပြီ။ Pat Mitchell က အစီအစဉ်မှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်တဲ့ ပကတိအတိုင်း ကြင်နာဖွယ်ကောင်းပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးပါဝင်တဲ့ စကားပြောဆိုခန်းမှာ သုံးယောက်သား အသက်ရှည်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးဝါဒ၊ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတို့အကြား ခင်မင်ရင်းနှီးမှုများ မတူပုံကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကျန်းမာစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာရဲ့ အနာဂတ်ထဲက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကဏ္ကကိုပါ။ Fonda ပြောတာက " ကျွန်မရဲ့ အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေတွေသာ မရှိခဲ့ရင် ကျွန်မ ဘာလုပ်နိုင်ခဲ့မလဲ ဆိုတာကို သိတောင် မသိနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မ ရပ်တည်နိုင်တာက အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ"တဲ့။
about female friendshipalot,
Pat Michell: အမျိုးသမီး ခင်မင်ရင်း
နှီးမှုအကြောင်း အများကြီး တွေးမိပြီး
and by the way, these two women,
စကားမစပ် ဒီအမျိုးသမီး နှစ်ယောက်အကြောင်း
have been my friends
Jane Fonda: Yes we have.
Jane Fonda- ဟုတ်တယ်ရှင်။
PM: And one of the things
that I read about female friendship
PM: အမျိုးသမီး ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအကြောင်း
is something that Cervantes said.
Cervantes ပြောခဲ့တာကို သတိရစရာပါ။
a lot about someone,"
သူက " လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို
in this caseawoman,
"by the company that she keeps."
So let's start with --
JF: We're in big trouble.
JF: ကျွန်မတို့ ဒုက္ခရောက်ပြီ။
Lily Tomlin: Hand me one of those waters,
LityTomlin: ရေလေး လှမ်းလိုက်ပါဦး၊
I'm extremely dry.
အာခေါင် အရမ်း ခြောက်တယ်။
JF: You're taking up our time.
JF: ရှင်က အချိန်ဆွဲနေတာပဲ။
We haveavery limited --
LT: Just being with her
sucks the life out of me.
LT: သူမနဲ့ရှိရတာ ကိုယ့်ဆီက
JF: You ain't seen nothing yet.
JF: ဘာမှ နားမလည်သေးပါလား။
Anyway -- sorry.
PM: So tell me, what do you
look for inafriend?
PM: ကဲ မိတ်ဆွေဆီမှာ ဘာကို ခင်ဗျား ရှာလဲ။
LT: I look for someone
who hasasense of fun,
LT: ပျော်ရွင်တဲ့စိတ် ရှိတဲ့သူ၊
who's forthcoming, who has politics,
who has evenasmall scrap
of passion for the planet,
someone who's decent,
hasasense of justice
ရည်မွန်ပြီး တရာမျှတမှုရှိတဲ့သူ၊ ကိုယ့်ကို
and who thinks I'm worthwhile.
တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ထင်တဲ့သူကို ရှာတယ်။
JF: You know, I was thinking this morning,
JF: သိတယ်နော် ဒီမနက်က တွေးနေမိတာလေ၊
without my women friends.
အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေတွေ မရှိခဲ့ရင်
I mean it's, "I have my friends,
JF: No, it's true.
I exist because I have
my women friends. They --
ကျွန်မ ရပ်တည်နေတာ အမျိုးသမီး
ရှင်က အဲဒီထဲက တစ်ယောက်လေ
I don't know about you. But anyway --
ရှင့်အကြောင်း မသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ...
You know, they make me stronger,
they make me smarter,
သိတဲ့အတိုင်း ကျွန်မကို ပို သန်မာအောင်၊
they make me braver.
They tap me on the shoulder when I might
be in need of course-correcting.
a good deal younger than me, too.
အများစုဟာ ကျွန်မထက် အရမ်းလည်း ငယ်ကြတယ်။
You know? I mean, it's nice --
သိတယ်မို့လား၊ ဆိုလိုတာက ၊ ကောင်းတယ်...
JF: No, I do, I include you in that,
JF: တကယ်ပါ၊ အဲဒီထဲ ရှင်ပါတဲ့အကြောင်း၊
it's nice to have somebody still around
to play with and learn from
when you're getting toward the end.
အနားမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရှိတာ ကောင်းတယ်။
I'm approaching --
I'll be there sooner than you.
ကျွန်မက နီးနေပြီ၊ ရှင့်ထက် ပိုစောလိမ့်မယ်။
LT: No, I'm glad to have you
parallel aging alongside me.
LT: ရှင်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြိုင်တူ အိုမင်း
JF: I'm showing you the way.
JF: ရှင့်ကို ဒီလမ်း ပြနေတာလေ။
LT: Well, you are and you have.
LT: ဟုတ်ပါပြီ၊ ဟုတ်ပါပြီရှင်။
PM: Well, as we grow older,
PM: အင်း ကျွန်တော်တို့တွေ
and as we go through
different kinds of life's journeys,
အိုမင်းလာပြီး ဘဝခရီး မျိုးစုံကို
your friendships vital and alive?
အရေးပါ ရှင်သန်ဖို့ ဘာလုပ်လဲဗျ။
LT: Well you have to usealot of --
LT: အများကြီး အသုံးပြုဖို့လိုတာပေါ့
JF: She doesn't invite me over much,
JF: သူက ကျွန်မကို အများကြီး မဖိတ်ဘူး၊
LT: I have to usealot of social media --
LT: လူမှုရေး မီဒီယာတွ​ေ အများကြီး သုံးရတယ်
You be quiet now. And so --
ရှင် အခု တိတ်တိတ်နေပါ ။ ဒီတော့
LT: And I look through my emails,
I look through my texts
LT: ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကို တွေ့ဖို့
to find my friends,
so I can answer them
သူတို့ဆီ အမြန်ဆုံး စာပြန်နိုင်အောင်ပေါ့။
because I know they need my counsel.
အကြောင်းက ကျွန်မရဲ့ အကြံဉာဏ်
They need my support,
are writers, or activists, or actors,
လိုတာက မိတ်ဆွေအများစုဟာ စာရေးဆရာ၊
and you're all three ...
andalong string
of other descriptive phrases,
သုံးမျိုးစလုံး၊ အထူးဖေါ်ပြရမယ့် အခြား
ရှင့်ဆီကို အမြန်ဆုံး ရောက်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ရှင့်အတွက်ရှိတာ ရှင် သိစေချင်တယ်။
JF: Do you do emojis?
JF: အီမိုဂျိ သုံးလား။
LT: That's embarrassing.
JF: I'm really into emojis.
JF: ကျွန်မတော့ အရမ်းစိတ်ပါတယ်။
LT: No, I spell out my --
LT: ဟင့်အင်း၊ ကျွန်မက..
I spell out my words of happiness
JF: You spell it right out --
JF: ဒါကို ရှင်းအောင်ပြောတယ်..
LT: I spell it, every letter.
LT: တစ်လုံးချင်း ထွက်ပြောတယ်။
JF: Suchapurist.
JF: အဲလောက် ထုံးမီစံကျတာ
You know, as I've gotten older,
I've understood more
the importance of friendships,
and so, I really make an effort
ဒါနဲ့ ကမ်းလှမ်းကာ အချိန်းအချက်လုပ်ဖို့
to reach out and make play dates --
အချိန် သိပ်အကုန်မခံပဲ တကယ်ပဲ
so, as Lily knows all too well,
ဒီတော့ Lily ကောင်းကောင်း သိသလိုပဲ
my books that I like,
I send to my friends.
LT: When we knew we would be here today
LT: သိခဲ့ကြလို့ ဒီနေ့ ဒီကိုရောက်တာလေ။
you sent mealot of books
about women, female friendships,
အမျိုးသမီး၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှု အကြောင်း
to see how many books,
အံ့ဩမိတာက စာအုပ်တွေ၊ မကြာခင်က
has been done recently --
လုပ်ထားတဲ့ သုသေသနတွေ များတာကိုပါ။
JF: And were you grateful?
LT: I was grateful.
PM: And --
LT: Wait, no, it's really important
because this is another example
LT: နေဦး၊ အရေးကြီးတဲ့
အကြောင်းက အမျိုးသမီးတ​ွေ ဘယ်လို
of how women are overlooked,
put aside, marginalized.
လျစ်လျူရှုခံ၊ ဘေးဖယ်ခံ၊ ပထုတ်ခံရတယ်
ဆိုတာက နောက်ထပ် ဥပမာလေ။
research done on us,
even though we volunteered lots of times.
သုသေသနပြုချက်က အရမ်းကို နည်းပါးတယ်။
LT: This is really exciting,
and you all will be interested in this.
LT: ဒါအရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်၊
The Harvard Medical School study has shown
Harvard ဆေးကျောင်း လေ့လာမှုက ပြတာက
that women who have
close female friendships
ရင်းနှီးတဲ့ အမျိုးသမီး ခင်မင်မှုရှိတဲ့
are less likely to develop impairments --
ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုနည်းပါးတယ်၊ အသက်ကြီးရင်
physical impairments as they age,
and they are likely to be seen
to be living much more vital, exciting --
သူတို့ကို အများကြီး ပိုရှင်သန်
JF: And longer --
JF: ပြီး ပိုအသက်ရှည်တယ်၊
LT: Joyful lives.
LT: ပျော်စရာ ဘဝတွေပေါ့။
JF: We live five years longer than men.
JF: အမျိုးသားတွေထက် ငါးနှစ် ပိုရှည်တယ်။
LT: I think I'd trade the years for joy.
နှစ်တွေကို အပျော်အတွက် လဲချင်မယ်ထင်တယ်။
LT: But the most important
part is they found --
LT: ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းက
the results were so exciting
and so conclusive --
ရလဒ်တွေဟာ အရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာ
that not having close female friends
is detrimental to your health,
ရင်းနှီးတဲ့ အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေမရှိခြင်းဟာ
ဆေးလိပ်သောက်တာ ၊ အဝလွန်တာတို့လိုပဲ
as much as smoking or being overweight.
JF: And there's something else, too --
JF: နောက်ထပ်လည်း ရှိသေးတယ်..
LT: I've said my part, so ...
LT: ကျွန်မတော့ ပြောပြီးပြီ ..
JF: OK, well, listen to my part,
because there's an additional thing.
JK: ကောင်းပြီ၊ ကျွန်မအပိုင်း နားထောင်ပါဦး၊
for years, decades --
they only researched men when they
were trying to understand stress,
စိတ်ဖိစီးမှုကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားရင်း
only very recently have they researched
what happens to women when we're stressed,
that when we're stressed -- women,
တွေ့ရတာက ကျွန်မတို့ အမျိုးသီးတွေဟာ
our bodies get flooded by oxytocin.
ကိုယ်မှာ အောက်စီတိုစင်တွေနဲ့ ပြည့်လာပါတယ်။
Which isafeel-good, calming,
ဒါက နေလို့ကောင်းပြီး ငြိမ်သက်ကာ
စိတ်ဖိစီးမှု လျော့စေတဲ့ ဟိုမုန်းပါ။
Which is also increased
when we're with our women friends.
ဒါက ကျွန်မတို့ရဲ့ အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေတွေနဲ့
And I do think that's one reason
why we live longer.
ဒါဟာ ကျွန်မတို့တွေ ပိုအသက်ရှည်ခြင်းရဲ့
And I feel so bad for men
diminishes the effects of oxytocin.
LT: Well, when you and I
and Dolly made "9 to 5" ...
LT: အင်း၊ ရှင်နဲ့ ကျွန်မ နဲ့ Dolly တို့
"9 to 5" ကားရိုက်တုန်းက
LT: We laughed, we did,
we laughed so much,
LT: ကျွန်မတို့ ရယ်တာ၊
we found we had so much in common
and we're so different.
Here she is, like Hollywood royalty,
ဒီမှာ သူမက Hollywood တော်ဝင်လိုပဲ။
I'm likeatough kid from Detroit,
ကျွန်မကတော့ Detroit က လူရမ်းကားလေး လိုပေါ့
[Dolly's]aSouthern kid
fromapoor town in Tennessee,
Dolly ဟာ Tennessee ရဲ့ ဆင်းရဲ့တဲ့
and we found we were so in sync as women,
ကျွန်မတို့ဟာ မိန်းမသားတွေ အနေနဲ့
အရမ်းကို လိုက်ဖက်တာကို တွေ့ရှိပြီး
and we must have --
we laughed -- we must have added
at leastadecade onto our lifespans.
ရယ်ခဲ့တယ်၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ အသက်ကိုကို
အနည်းဆုံး ဆယ်နှစ်လောက် တိုးပေးနိုင်ခဲ့တာ။
JF: I think -- we sure
crossed our legsalot.
တင်ပျဉ်ချိတ် များများထိုင် ဖို့ကတော့
LT: I think we all know what you mean.
ရှင်ဆိုလိုတာ အားလုံးသိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
PM: You're adding decades
to our lives right now.
PM: အခု ခင်ဗျားတို့ အသက်ကို
So among the books that Jane
sent us both to read on female friendship
အမျိုးသမီး ခင်မင်မှုအကြောင်း ဖတ်ဖို့
နှစ်ယောက်လုံးကို Jane ပို့ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေ
was one byawoman we admire greatly,
Sister Joan Chittister,
အနက်က တစ်အုပ်က ကျွန်တော်တို့ အရမ်းကို
လေးစားတဲ့ Sister Joan Chittister ပါ။
who said about female friendship
အမျိုးသမီး ခင်မင်မှုအကြောင်း သူမပြောတာက
that women friends
are not justasocial act,
အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေတွေဟာ လူမှုရေး
they'reaspiritual act.
Do you think of your friends as spiritual?
Do they add something
spiritual to your lives?
ခင်ဗျားတို့ ဘဝကို စိတ်ပိုင်းအရ
LT: Spiritual -- I absolutely think that.
LT: စိတ်ပိုင်း... လုံးဝကို ထင်တာပေါ့။
Because -- especially people
you've knownalong time,
အကြောင်းက အထူးသဖြင့် ကိုယ်အကြာကြီး
people you've spent time with --
ကိုယ့်နဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးတဲ့ လူတွေ
I can see the spiritual
essence inside them,
the tenderness, the vulnerability.
There's actually kind ofalove,
an element of love in the relationship.
ဆက်နွယ်မှုထဲက မေတ္တာရဲ့ အစိတ်အပိုင်း၊
I just see deeply into your soul.
ရှင့်ရဲ့ စိတ်ရင်းကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း
PM: Do you think that, Jane --
PM: Jane ရော၊ ဒီလိုထင်လား။
LT: But I have special powers.
LT: ကျွန်မမှာ အစွမ်းထူးတွေရှိတယ်
JF: Well, there's all kinds of friends.
JF: အင်း မိတ်ဆွေ မျိုးစုံရှိပါတယ်။
There's business friends,
and party friends,
ဒါတွေ အကုန် ကျွန်မမှာရှိတယ်။
But the oxytocin-producing
friendships have ...
ဒါပေမဲ့ အောက်စီတိုစင် ထုတ်ပေးတဲ့
They feel spiritual
because it'saheart opening, right?
ဘာလို့ဆို ဒါက ရင်ဖွင့်တာပဲမို့လား။
You know, we go deep. And --
သိတဲ့အတိုင်း နက်ရှိုင်းတယ်။ ပြီး..
I find that I shed tearsalot
with my intimate friends.
ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေ အရင်းအချာတွေနဲ့ မျက်ရည်
အများကြီး ကျခဲ့ဖူးတယ်လို့ ထင်တယ်။
Not because I'm sad but because
I'm so touched and inspired by them.
LT: And you know one of you
is going to go soon.
LT: ရှင်တို့ထဲက တစ်ယောက်
PM: Well, two of us are sitting here,
Lily, which one are you talking about?
PM: အင်း နှစ်ယောက်စလုံး ဒီမှာ ထိုင်
နေကြတယ်၊ Lily ဘယ်သူ့ကိုပြောနေတာလဲ။
And I always think, when women
talk about their friendships,
that men always lookalittle mystified.
ပြောရင် ယောက်ျားတွေဟာ အမြဲ နည်းနည်း
What are the differences, in your opinion,
ခင်ဗျား အမြင်မှာ ယောက်ျားတွေ
between men friendships
and women friendships?
မိန်းမတွေ ရင်းနှီးမှုကြားက ကွာခြားချက်တွေ
JF: There'salot of difference,
JF: ကွာခြားချက်က အများကြီးပါ။
a lot of empathy for men --
ကျွန်မတို့မှာရှိတာ သူတို့မှာ မရှိကြဘူးလေ။
Which I think may be why they die sooner.
ဒါကြောင့် သူတို့ စောစော သေကြတာလို့
I havealot of compassion for men,
ယောက်ျားတွေကို အများကြီး ကရုဏာ သက်မိတယ်၊
because women, no kidding, we --
women's relationships, our friendships
are full disclosure, we go deep.
အမျိုးသမီး ဆက်နွယ်မှု၊ ကျွန်မတို့ရဲ့
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုဟာ နက်ရှိုင်း လို့ပါ။
We risk vulnerability --
this is something men don't do.
ကျွန်မတို့က အားနည်းချက်ကို စွန့်စားတယ်
..ဒါက ယောက်ျားတွေ မလုပ်ကြဘူးလေ။
have I asked you, "Am I doing OK?"
ဆိုလိုတာက "ကျွန်မ အဆင်ပြေလား" လို့
"Did I really screw up there?"
PM: You're doing great.
PM: လုပ်တာ ကောင်းပါတယ် ဗျ။
JF: But I mean, we ask questions like that
JF: ဒါပေမဲ့ ဆိုလိုတာက ကျွန်မတို့
of our women friends,
You know, people describe women's
relationships as face-to-face,
သိတဲ့အတိုင်း၊ လူတွေက အမျိုးသမီး
ဆက်ဆံရေးကို မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ ဆိုပြီး
whereas men's friendships
are more side-by-side.
LT: I mean most of the time
men don't want to reveal their emotions,
LT: ဆိုလိုတာက အချိန်အများစုမှာ
ယောကျားတွေဟာ ခံစားချက်တွေကို မလှစ်ဟချင်ပဲ
they want to bury deeper feelings.
I mean, that's the general,
ဆိုလိုတာက ဒါဟာ ယေဘုယျ၊ သမားရိုးကျ အတွေးပါ။
They would rather go off in their man cave
and watchagame or hit golf balls,
or talk about sports,
or hunting, or cars or have sex.
အကြောင်းပြောတာ၊ အမဲလိုက်တာ၊ ကားတွေနဲ့
I mean, it's just the kind of --
it'samore manly behavior.
ဆိုလိုတာက ဒါက ယောက်ျား
JF: You meant --
LT: They talk about sex.
LT: သူတို့ လိင်ကိစ္စပြောတာ။
I meant they might have sex
ဆိုလိုတာက သူတို့ရဲ ယောက်ျားဂူထဲ
if they could get somebody
in their man cave to --
JF: You know something, though,
that I find very interesting --
ကျွန်မထင်တဲ့ဟာ တစ်ခု ရှင်သိပေမယ့်
and again, psychologists didn't know this
until relatively recently --
is that men are born every bit
as relational as women are.
ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေလိုပဲ မွေးချိန်မှာ
If you look at films
of newborn baby boys and girls,
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မွေးကင်းစ ယောက်ျားလေး၊
you'll see the baby boys
just like the girls,
gazing into their mother's eyes,
you know, needing that relational
သိတဲ့အတိုင်း၊ စွမ်းအင်ရဲ့ ဆက်နွယ်မှုကို
When the mother looks away,
they could see the dismay on the child,
မိခင်က မျက်နှာကိုလွှဲလိုက်တဲ့အခါ ကလေးရဲ့
even the boy would cry.
They need relationship.
သူတို့ဟာ ဆက်နွယ်မှုကို လိုအပ်ကြတယ်။
So the question is why,
as they grow older, does that change?
ဒီတော့ မေးခွန်းက သူတို့ကြီးလာတော့
And the answer is patriarchal culture,
which says to boys and young men
that to be needing of relationship,
to be emotional with someone is girly.
Thatareal man doesn't ask
directions or expressaneed,
တကယ့် ယောက်ျားတွေဟာဟာ လမ်းညွန်ချက်
တောင်းတာ၊ လိုအပ်တာကို မေးတာ မလုပ်ဘူး။
they don't go to doctors if they feel bad.
နေထိုင်မကောင်းရင် ဆရာဝန်ဆီ မသွားဘူး။
They don't ask for help.
There'saquote that I really like,
အရမ်းကြိုက်တဲ့ ကိုးကားချက် တစ်ခုက
"Men fear that becoming 'we'
will erase his 'I'."
ဖြစ်လာမှုက သူ့ရဲ့ "ငါ"ကို ဖျက်ပစ်မှာကိုပါ။"
You know, his sense of self.
သိတဲ့အတိုင်း၊ သူရဲ့ အတ္တ သဘောလေ။
Whereas women's sense of self
has always been kind of porous.
အမြဲ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။
But our "we" is our saving grace,
ဒါပေမဲ့ "ငါတို့" ဆိုတာဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့
it's what makes us strong.
ဒါက ကျွန်မတို့ကို သန်မာအောင် လုပ်ပေးတားပါ။
It's not that we're better than men,
ကျွန်မတို့ ယောက်ျားတွေထက် မသါပါဘူး။
our masculinity to prove.
ကျွန်မတို့ ဖိုသဘာဝကို သက်သေပြဖို့ မလိုဘူး။
LT: And, well --
LT: ပြီးတော့၊ အင်း...
JF: That'saGloria Steinem quote.
JF: ဒါ Gloria Steinem ရဲ့ အဆိုပါ။
So we can express our humanity --
LT: I know who Gloria Steinem is.
ဒီတော့ လူသားဆန်မှုကို ဖော်ပြနိုင်တယ်။
LT: Gloria Steinem ကိုသိတယ်။
JF: I know you know who she is,
JF: သူမကို ရှင်သိတာ သိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ထင်တာက
No, but it'sagreat quote, I think.
ဒါတကယ့် အဆိုကြီးလို့ ထင်တယ်။
We're not better than men, we just
don't have our masculinity to prove.
ကျွန်မတို့ ယောက်ျားတွေထက် မသာပါဘူး။
သက်သေပြစရာ ဖိုသဘာဝ မရှိဘူး။
ဒါက တကယ် အရေးကြီးပါတယ်။
LT: But men are
so inculcated in the culture
LT: ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ
to be comfortable in the patriarchy.
And we've got to make
something different happen.
JF: Women's friendships
are likearenewable source of power.
JF: အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုဟာ
ထပ်ဆန်းသစ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ဆင်တူတယ်။
LT: Well, that's what's exciting
LT: ဒါက ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး
It's because our friendships --
are justahop to our sisterhood,
ချစ်ကြည်မှု ခရီးတစ်ထောက် ​ဖြစ်ပြီး
and sisterhood can be
a very powerful force,
ညီမရင်းချာ ချစ်ကြည်မှုဟာ အရမ်း
အစွမ်းရှိတဲ့ အားအင်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။
to give the world --
ဖြစ်သင့်တဲ့ ကမ္ဘာကို ဖန်တီးဖို့လေ။
the things that humans desperately need.
လူသားတွေ အရူးအမူး လိုအပ်တာတွေပေါ့။
PM: It is why we're talking about it,
PM: ဒါကြောင့် ဒါကို ပြောနေကြတာပါ။
because women's friendships are,
as you said, Jane,
Jan ပြောသလို ဆန်းသစ်လို့
a renewable source of power.
So how do we use that power?
ဒီတော့ ဒါကို ဘယ်လို သုံးကြမလဲ။
JF: Well, women are the fastest growing
demographic in the world,
JF: အင်း၊ မိန်းမတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ
အမြန်ဆုံး တိုးပွားနေတဲ့ လူဦးရေပါ၊
And if we harness our power,
ကျွန်မတို့ရဲ့ စွမ်းအားကို အသုံးချနိုင်ရင်
And guess what? We need to.
ဘာလို့ ထင်လဲ။ လုပ်ဖို့လိုတာပါ။
And we need to do it soon.
လုပ်ဖို့လိုတာ တစ်ခုက ဒါကို
and we can do it as women --
for one thing, we kind of set
the consumer standards.
We need to consume less.
We in the Western world
and when we buy things, we need to
buy things that are made locally,
ပစ္စည်းတွေ ဝယ်တဲ့အခါ ဒေသတွင်း
when we buy food, we need to buy food
that's grown locally.
အစားအစာဝယ်ရင် ဒေသတွင်း စိုက်တဲ့
that need to get off the grid.
ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်ဘာသာ လုံလောက်အောင်
We need to make ourselves
independent from fossil fuels.
တွေကို မှီခိုရတာ ကင်းဖို့လိုတယ်။
And the fossil fuel companies --
the Exxons and the Shell Oils
and those bad guys --
Exxons နဲ့ Shell Oils နဲ့ ဒီလူဆိုးတွေဟာ...
cause they are --
without going back to the Stone Age.
ကျောက်ခေတ်ကို ပြန်မသွားရပဲနဲ့ ဒါကို
မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောတော့မှာ မို့ပါ။
You know, that the alternatives
just aren't quite there yet,
There are countries in the world right now
အကြိမ်ကြိမ် သုံးနိုင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ကို
that are living mostly on renewable
energy and doing just fine.
သုံးနေလို့ အဆင်ပြေနေတဲ့ နိုင်ငံတွေ
အများကြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေကြပါပြီ။
wean ourselves from fossil fuel
back in the Stone Age,
and in fact, if we begin
to use renewable energy,
and not drill in the Arctic,
and not drill --
LT: Oh, boy.
JF: And not drill
in the Alberta tar sands --
JF: Alberta မှာ ရေနံ ကတ္တရာတွေ မတူးရင်..။
there will be more democracy
and more jobs and more well-being,
ဒီမိုကရေစီ ပိုရမယ်၊ အလုပ်တွေပိုများမယ်၊
and it's women that are
going to lead the way.
ပြီး အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီနည်းကို
LT: Maybe we have the momentum
to startathird-wave feminist movement
LT: ဖြစ်နိုင်တာက ကျွန်မတို့တွေဟာ ကမ္ဘာ
တစ်လွှားက ညီမရင်းချာ ချစ်ခင်သူတွေနဲ့အတူ
with our sisterhood around the world,
လှုပ်ရှားမှု အဟုန် ရှိလာနိုင်မှာပါ။
with women we don't see,
women we may never meet,
but we join together that way,
Aristotle said --
most people --
people would die without male friendships.
ယောက်ျား ခင်မင်ရင်းနှီးမှု မရှိရင်
And the operative word here was "male."
သော့ချက်စကားလုံးက "ယောက်ျား" ဆိုတာပါ။
Because they thought that friendships
should be between equals
အကြောင်းက ရင်းနှီးမှုဟာ တူညီမှုကြားမှာ
and women were not considered equal --
မိန်းမတွေကို အတူတူလို့ မစဉ်းစားကြလို့လေ။
JF: They didn't think
we had souls even, the Greeks.
ဂရိတွေက ကျွန်မတို့ကို အသက်ရှိတယ်
LT: No, exactly. That shows you
just how limited Aristotle was.
တကယ်၊ အတိအကျပဲ။ ဒါက Aristotle ရဲ့
And wait, no, here's the best part.
နေဦး၊ အကောင်းဆုံး အပိုင်းကို ရောက်လာပြီ။
men do need women now.
မိန်းမတွေကို မလိုဘူး ဆိုတောင်၊
The planet needs women.
ကမ္ဘာကြီးက မိန်းမတွေကို လိုအပ်နေတယ်။
The US Constitution needs women.
US အခြေခံဥပဒေက မိန်းမတွေကို လိုအပ်တယ်။
We are not even in the Constitution.
ကျွန်မတို့ဟာ အခြေခံဥပဒေမှာတောင် မပါဘူး။
JF: You're talking about
JF: ရှင်က တူညီတဲ အခွင့်အရေး
Justice Ginsberg said something like --
တရားသူကြီး Ginsberg က ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။
every constitution that's been written
includedaprovision that made women
citizens of equal stature,
အမျိုးသမီးအား တန်းတူရည်တူ နိုင်ငံသား
but ours does not.
ဒီတော့ ဒါက စဖို့ကောင်းတဲ့နေရာ ဖြစ်မယ်။
Very, very mild --
And gender equality, it's likeatide,
လိင်ညီမျှမှု၊ ဒါက ဒီရေလိုပဲ။ လှေတွေ
it would lift all boats, not just women.
အားလုံးကို မတင်မှာ၊ မိန်းမတွေပဲမဟုတ်ဘူး
PM: Needing new role models
PM: ဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာ
How to be friends,
ဘယ်လို မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်ဖို့၊
how to think about our power
as citizens of the world,
and this is what makes Jane and Lily
ဒါက အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လို
a role model of how
women can be friends --
Jane နဲ့ Lily တို့ ကနေပြီး
and even if they occasionally disagree.
တစ်ခါတစ်လေ သူတို့တွေ သဘောထား
Jane Fonda နှင့် Lily Tomlin: ရာသက်ပန် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ ကျင်းပခြင်း။ | TED Talk | TED.com